CAR oo beesha caalamka ay illawday - BBC Somali
Image caption Dad ka qaxay CAR oo sugaya cunto gargaar
Hay’adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobey iyo Barnaamijka cuntada aduunka ee WFP ayaa sheegaya in dhibaatada ka jirta Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay beesha caalamka illawday.
Labada hay’ad waxa ay sheegayaan inay si degdeg ah ugu baahan yihiin dhaqaale ay ku sii wadaan howlahooda gargaarka ee CAR. Waxayna intaa ku dareen in dadaalkooda uu dhaafi la’yahay gaar siinta adeegyada aasaasiga ah.
Xaaladda cakiran ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika uma muuqato inay tahay mid ka soo reyneysa ama hagaageysa.
Qaramada Midoobey ayaa sheegeysa in dadka ay maalmo ama isbuucyo ay lugeeyaan si ay dalkaasi uga qaxaan.
Waxaa sare u sii keceysa tirade dadka gaaraya dalka deriska la ah ee Cameroon, dadkaasi badan koodana waxaa ka muuqda dhibaatooyin loo geystay.
Caruurta ayaa lagu warramayaa inay hayso macluul aad u daran, qaar kamid ah ayaa dhinta marka la gaarsiiyo xarumaha gargaarka lagu bixiyo.
Hay’adaha Qaramada Midoobey ee caawinaya dadkan ayaa waxaa soo wajahday lacag la’aan.
Image caption Dhallinyarada qeybta ka ah dhibaatada CAR
Dagaallada dalka Jamhuuriyadda bartamaha Afrika ayaa bilowday sanad ka hor, kaddib markii kooxda Mauslimiinta ee Mucaaradka aheyd ay dalkaasi qabsatay awoodana la wareegtay.
Tani iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay dalka CAR ka meysan dhalan dowlad si rasmi ah uga howlgasho.
Iyadoo ay ku sugan yihiin qiyaastii Todobo-kun oo nabad ilaaliyayaal ah oo ka kala socda Afrika iyo Faransiiska, hadana kooxaha Muslimiinta iyo Masiixiyiinta waxay siiwadaan inay isdilaan oo ay dagaallamaan.
Rubac ka mid ah dadka dalkaasi ayaa barakacay. Dadaallada nabadda ee socday ayaa dhankooda fashilmay.
Wareeggii ugu dambeeyay ee wadahadalada oo lagu waday in la soo afjaro Arbacada ayaa dib loo dhigay kaddib markii ay guul dareysatay in wakiilada muhiimka ah ee mucaaradkii hore ay ka qeybgalaan.